किन गइरहन्छन् ज्ञानेन्द्र र हिमानी ‘नाइट क्लब’ ? – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on किन गइरहन्छन् ज्ञानेन्द्र र हिमानी ‘नाइट क्लब’ ?
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह ठमेलको नाइट क्लबमा गएर नाचेको फोटो र भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि केही वर्ष धार्मिक कार्यबाहेक अन्यत्र सहभागी नहुने गरेका पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरु पछिल्ला वर्षबाट नाइट क्लबमा गएर युवाहरुसँग नाचगान गर्दै रमाइलो गर्न थालेका छन् ।
गत शनिबार राति ठमेलको नाइट क्लब ‘ लर्ड अफ ड्रिंक्स’मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वयुवराज्ञी हिमानीसहित पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरु कलाकार तथा युवाहरुसँग गीत गाउँदै नाचेका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी उक्त नाइट क्लबमा नाचेको फोटो भिडियो भाइरल बनेको हो । यसअघि उनीहरु दरबारमार्ग र लाजिम्पाटमा रहेको त्रिसरा क्लबमा जाने गरेका थिए । त्यहाँ पनि उनीहरु नाचगान गर्ने गरेका थिए।
क्लब पुग्ने उनीहरुलाई युवाहरुले भरपूर साथ दिएको देखिन्छ। पूर्वराजपरिवारका सदस्यसँग लिइएका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै ‘जनताका राजा’जस्ता शब्द लेखेका हुन्छन् । राजनीतिप्रति चरम असन्तुष्टि बढिरहेका बेला पूर्वराजपरिवारका सदस्य युवाहरुमाझ पुग्ने गरेका छन् र उनीहरुको मन जित्ने प्रयास गर्छन् । राजसंस्थाप्रति आममानिसको आकर्षण बढाउने गरि हुने पूर्वराजपरिवारका सदस्यको नाइट क्लब यात्राले युवापुस्ताको ध्यान तान्न चाहेको देखिन्छ।
यसरी पूर्वराजपरिवारको धार्मिक र नाइट क्लब यात्रालाई लिएर नेताहरुको खरो टिप्पणी आउने गरेको छ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी आफ्नो भ्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
← नेपाली भूमीबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह → बुवा ज्ञानेन्द्र र श्रीमति हिमानीको डान्स हेर्दै पारश मख्ख